26 qof oo ku dhimatay doon dheereysa oo siday dad rakaab ah kula dhacday markab, shilkaan uu ka dhacday Bangladesh. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii 26 qof oo ku dhimatay doon dheereysa oo siday dad...
26 qof oo ku dhimatay doon dheereysa oo siday dad rakaab ah kula dhacday markab, shilkaan uu ka dhacday Bangladesh.
Ugu yaraan 26 qof ayaa dhimatay ka dib markii doon dheereysa ay dad rakaab ah kula dhacday markab, waxaana shilkaan uu ka dhacday Bangladesh.
Booliska ayaa sheegay in doonidaan dheereysa ay la socdeen ilaa 36 rakaab ah, waxaana ay ka timid magaalada Mawa ee u dhow magaalada Shibchar.
“Waxaan ilaa hada soo helnay 26 meyd ah oo ay ku jirto haweeney. Waxaan sidoo kale badbaadinay shan qof oo dhaawac ah, oo ay ku jiraan saddex carruur ah” ayuu yiri Amir Hossain oo sarkaal ka tirsan bilayska.
Doonta dheereysa ayaa siday rakaab xadgudub ku ah xayiraadaha dowladda ay sartay dalka inta lagu gudajiro bandowga covid-19 oo waddanka dhan ah.
Dad fara badan iyo dadka deegaanka ayaa 26 mayd ka soo saaray biyaha waxayna raadinayeen kuwa wali la la’yahay, qof goobjooge ahaa oo magaciisa lagu soo koobay Cabdiraxmaan ayaa sheegay in uu jiray sawaxan weyn markii shilku uu dhacay, kadibna doonta ay rogmadeen.
“Markii aan ku degdegnay goobta waxaan helnay doontii dheereysa oo u kala qeybsan labo qaybood. Dad badan ayaa bilaabay in ay qabtaan howlo samatabbixin ah, ka hor inta aysan ku soo biirin booliska iyo dab damiska, ”ayuu yidhi.
Previous articleXog:gen Sadaaq Joon hor kacey Ciidamada Badbaada Qaran oo kulan Caawa yeeshay oo Go aan culus Gaaray
Next articleSaraakiisha Bad baado Qaran oo gudi Saraakiil ah magacaabay iyo go aano culus ay soo sareen
Darawal gaadiidka Xamuulka ah oo xalay lagu dilay Magaalada Gelinsoor ee...
Magaalada Gelinsoor ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa xalay lagu dilay Nin lagu Magacaabi jiray Maxamed Ciise lugeey, waxaana dilkiisa kasoo baxaya warar kala duwan. Ninka...
Maamulka Puntland oo mar kale ku celiyey in Shirka lagu wabto...
dab ka kacay Isbitalka Ibn al-Khatib ee duleedka Baghdad oo ay...
Ra’iisul Wasaarr Rooble oo hadal kooban ka jeediyay dagaaladii ka dhacay...
Kenya Soomalida ku nool Dalkeeda Tarxiil ku bilaabeyso
Dacwadda Trump oo loo gudbiyey Senate-ka laga doodayo bisha soo socota